Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ - DIY လျှပ်စစ်စကိတ်စီးအကြောင်း
နှင့်အတူ လျှပ်စစ်စကိတ်စီး နေသမျှကာလပတ်လုံးအကောင်းဆုံးကိုပိုင်ဆိုင်အဖြစ်ပူနှင့်ခေတ်သစ်လူငယ်များကကြိုဆိုကြသည် လျှပ်စစ်ချိန်ခွင်လျှာဘုတ်အဖွဲ့ , သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဦးစားပေးအညီအချို့သော DIY လုပ်ဖို့ပိုများပါတယ်။ မကြာသေးမီကငါ Instagram ကိုအပေါ်အချို့သောအေးမြ DIY စကိတ်စီးထွက်ရှာပါ။
အရှိန်အဟုန်: တစ်ဦးကမြန်ဆန်, E-longboard သင်အချိန်၌သင်တို့၏ဦးတည်ရာအတွက်အောင်မြင်ဖို့ကူညီပေးပါမည်။ တစ်နာရီပုံမှန်မြန်နှုန်း 30km, ထိပ်အမြန်နှုန်း, တစ်နာရီကို 45km ရောက်ရှိလာခဲ့ပိုမြန်သွားပါစေနိုင်သည်။ နောက်ထပ်အကဲဖြတ်လျှပ်စစ်စကိတ်စီးနိုင်အောင်အပေါ်စျေးဝယ်သွားနှင့်, ထိုကဲ့သို့သောအတို-ခရီးသွားကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောနေ့စဉ်အသွားအပြန်ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်တဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
အောက်ပါ၏ Koowheel ဝယ်ပြပွဲများမှာ လျှပ်စစ် longboard စကိတ်စီး ကျွန်တော်တို့ဟာ Instagram ကိုအပေါ်ကိုရွေးချယ်ကြောင်း D3M ။ သငျသညျအရာတစျခုကိုကြိုက်သလဲ? သူတို့ဟာအအေးခံခြင်းနှင့်စိတ်ကူးရှိပါတယ်။ Koowheel အလွန်ဖြစ်ပါတယ် ဖက်ရှင်လျှပ်စစ်စကိတ်စီး သည်၎င်း၏ထိရောက်မှုအားဖြင့်တအံ့တသြဖြစ်ကြောင်းနောက်လိုက်တစ်ဦးကြီးမားတဲ့အခြေစိုက်စခန်းတည်တံ့ခိုင်မြဲကြောင်း။ အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်ပူရသနည်း ဒါဟာ CanadianMaple Wood က + ဖန်ဖိုင်ဘာ (optional) က The ရှင်းလင်းရေးမြေ 7-layer ကိုမွို့၌ရှိသမျှသောလမ်းများများအတွက်သင့်လျော်သော 85mm (3.35inch), ဖြစ်ပြီး, Dual-Brushless Hub-Motors ကဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, အစားထိုးဘက်ထရီဘက်ထရီထုပ်ရှည်သွားပါ, 60km ကြာရှည်နိုင်ပါတယ် 2pcs ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမြင့်မားတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်ကနောက်ဆုံးရောက်ရှိလာသည့်အခါထိုးယပ်ခတ်ပြီ။
သင်တို့သည်ဤဖန်တီးမှု DIY ကိုမြင်သောအခါ, သင်သည်သင်၏စိတ်တွင်တစ်ဦးထက်ပိုထူးခြားတဲ့စိတ်ကူးရှိပါသလား? အတော်များများကစိတ်ကူးများအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေကြသည်ကိုသင်တတ်နိုင်သမျှသင့်ရဲ့ထူးခြားတဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုပြသပြီးတော့သင့်ရဲ့ Instagram ပေါ် tag ကို Koowheel ဖွငျ့ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှကျေးဇူးပြုပြီးနိုင်ပါတယ်။ Koowheel အရာရှိတဦးက website နှင့် Facebook ကသင့်ရဲ့ KOOWHEEL အတွေ့အကြုံကိုဝေမျှပါလိမ့်မယ်။
သူတို့ကခရီးမတတျနိုငျသ, ဒါပေမယ့်အချိန်တိုအတွင်းသင်ယူခဲ့တယ်။ ဤအမှုအရာတို့ကိုအပေါ်ပတ်လည်၌တွေ့ကြုံခံစားရန်စုစုပေါင်း hoot ဖြစ်ကြသည်။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေါ်တွင်သင်နဲ့အတူယူနှင့်သင့်လမ်းနေအိမ်သို့ပေါ်မှာစီး။ , မကြာသေးမီက Koowheel ဖွံ့ဖြိုး 2nd မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ လျှပ်စစ်စကိတ်စီး Kooboard အစားထိုးဘီးနှင့်အတူ။ အခုတော့ကြိုတင်မှာယူကိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်အဘယ်အရာကို2ရက်နေ့တွင်အသစ်သောင့်ကိုမေးလိမ့်မယ် ကြိမ်မြောက် မျိုးဆက်တဦးတည်း? ငါ့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအားဖြင့်သင်တို့ကိုပြောပြပါရစေ။
1. နယူး mainboard
3. နယူး Motors က / wheel
97MM Motors က / ဘီး
အစားထိုးမှ PU ဘီးနှင့်အတူနယူး 350W က x2Motors က
တမူထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းမော်တာ maximumly အအေးကူညီပေးပါမည်
နယူးအစီအစဉ်ကိုရုပ်ပျိုဘရိတ်ခြင်းဖြင့်တရားစွဲဆိုကျော်ကနေဘက်ထရီကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်။ ထိုအခါ Kooboard ဖြည်းဖြည်းကိုချိုးဖောက်နှင့်ရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်။ နယူးရှဟံကုန်းပတ် & ဆုပ်ကိုင်တိပ်နှင့်ထို့ထက် ပို. ...
Post ကိုအချိန်: Sep-22-2017